Raadin dhab ah "Exposé" oo leh Skippy-XD iyo Brightside oo ku taal Arch Linux | Laga soo bilaabo Linux
Saameynta Real Exposé oo leh Skippy-XD iyo Brightside oo ku taal Arch Linux
Wisp | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Markaan ka shaqeyno bii'adaha desktop-ka fudud (XFCE, LXDE, Openbox), mararka qaar waxaan seegnaa fudeydka "Exposé" ee saameynta Mac OS X na siineysa (isku xirka dhamaan daaqadaha firfircoon ee hal shaashad ah) iyo tan GNU / Linux aan ku leenahay waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Miisaanka 'Compiz Scale'. Waxaa jira beddel fudud oo xoog badan oo lagu gaaro saameyntaan miisaska miisaanka culus: Skippy-XD laakiin waxay leedahay khasaaro ah in aad dhaqaajiso waa inaad maamushaa barnaamijka kadibna riix fure (asal ahaan waa F11 ) luminta shaqeynta taas oo kaliya adoo ku dhejinaya tilmaamaha jiirka geeska firfircoon.
Laakiin wax walba waa suurtagal Arch Linux. Halkan waxaa ku yaal tilmaame kooban oo ku saabsan sida loo yeesho «Exposé» gudaha Skippy-XD oo leh geeso firfircoon, tanna waxaan u adeegsan doonnaa barnaamij ruug-caddaa ah laakiin weli waxtar leh oo shaqeynaya: Brightside.
Marka hore waa inaad ku rakibtaa Skippy-XD AUR, laakiin ma ahan nooca "asalka ah", waxaan ku rakibi doonaa nooc waxyar laga beddelay oo laga heli karo AUR iyada oo loo marayo GIT oo asal ahaan ka hawlgala Skippy-XD amarka fudud adigoon isticmaalin fure loo xilsaaray; Tusaalahan waxaan u adeegsan doonnaa Packer inaan ku rakibo laakiin waxaan ku sameyn karnaa Yaourt sidoo kale:
Hadda waxaan rakibi doonnaa Brigthside, waxa barnaamijkani qabanayo ayaa loo xiraa geesaha iyo dhinacyada shaashadda wixii amar ama amar ah ee aan dooneyno annaga oo si fudud ugu wareejinayna tilmaame jiirka aagga firfircoon; waxay noqon kartaa in la furo feyl, la maamulo qoraal, ama la maamulo barnaamij. Waxaan ku rakibnaa Packer ama Yaourt:
Hadda waxaan diyaar u nahay sixirka: waxaan u qorsheynaynaa Brigthside inay ka shaqeyso Skippy-XD geeska aan dooneyno, boosteejada aan ku qoreyno:
Daaqadda qaabeynta Waxqabadyada 'Screen Actions' ayaa soo muuqan doonta, waxaan calaamadeyneynaa "Falalka Configurable" waxaan calaamadeyneynaa sanduuqa geeska shaashadda ee aan dooneyno inaan dhaqaajino, tusaalahan wuxuu noqon doonaa geeska kore ee midig (Top right corner) iyo liistada hoos u hoosaysa ayaan ku dooran doonnaa « Ficil Custom ... »iyo daaqad kale ayaa u soo muuqan doonta sida sawirka soo socda:
Waxaan qornay: xayeysiis-xd, waxaan xirnaa labada daaqadood waana intaas. Hadda waa inaad maamushaa Brightside:
Waxaan furey dhowr daaqado, waxaan udhaqaaqeynaa tilmaamaha jiirka geeska aan dooranay waxaanan lahaan doonnaa wax sidan oo kale ah:
Si aad uhesho Brightside bilowga nidaamka, waa inaad kudartaa liiska codsiyada bilowga jawiga desktop, XFCE waxay ahaan laheyd "Fadhiga iyo bilawga" tabka "Auto Start of applications" riix "+ Add" iyo magaca waxaan ku qoreynaa: Farxad iyo Amarka: dhalaalaya waan aqbalnaa waana diyaar. LXDE nidaamka ayaa la mid ah oo Openbox amarka waa in lagu daraa gacanta "Autostart.sh": xigasho & dhamaadka qoraalka, waanu keydinay waana intaas.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan ay waxtar kuu leeyihiin adiga, iyo salaan dhammaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Saameynta Real Exposé oo leh Skippy-XD iyo Brightside oo ku taal Arch Linux
35 faallooyin, ka tag taada
Heer sare Sidoo kale, waxay i xasuusisaa waxyaabo badan oo ah GNOME Shell.
PS: aan aragno haddii aan sameyn karo nuqul ka mid ah casharka @ elav ee ku saabsan Arch Linux (dhab ahaantii, taasi 'distro waa mid cajaa'ib leh).
Waxay ku jirtaa XFCE, laakiin qaabka iyo muraayadaha daaqaddu waa GTK-3 waxaana loo yaqaan "Boje" runtiina waxay uga tagaysaa mid aad u qurux badan:
Ku jawaab Brizno
Heer sare Waxaan ku ridi doonaa Slackware-keena oo leh XFCE.
Maxay tahay tabaruc weyn ... Miyuu ku shaqeeyaa daaqadaha la yareeyay?
Nasiib darrose maya, Skippy-XD kaliya waxay ku tusin doontaa daaqadaha la sarreeyay oo leh guji midig oo horeyba ugu jiray gudaha Skippy-XD kuwa furan ayaa la yareyn doonaa.
"Taasina waa sida maamule daaqad yar uu si tartiib tartiib ah u noqday jawi desktop ah oo fiilooyin leh."
Waa Sharciga Nolosha, sida uu sheegayo ilaaliyaha software-ka bilaashka ah ee San iGNUcio, inuu ku jiro bytes.
Tilmaam weyn, aad ayaad ugu mahadsantahay wadaagistaada ...
Waxba, Openbox wuxuu ku sameeyaa farqi weyn oo ka tagi doona ugu yaraan wax ka badan hal la yaab.
Tuto aad ufiican, mahadsanid !!! 😉
Salaan kadib waad salaaman tahay, ma noo sharxi kartaa sida loo dalbado tan Lubuntu 13.04 haddii aysan ahayn wax badan in la weyddiiyo oo aad horay ugu mahadsan tahay
Xaaladdan gaarka ah waxay ku shaqaysaa kaliya Arch Linux sababta oo ah nooca la beddelay ee Skippy-XD ee loo baahan yahay waxaa lagu soo ururiyey oo keliya PGKBUILD ee AUR ee Arch, in kastoo aan arki doono haddii aan soo ururin karo lambarka isha si aan u sameeyo xirmo .deb ah oo ka shaqeyn doonta Crunchbang (Debian) iyo in aragti ahaan sidoo kale ka shaqeeya Ubuntu, isla marka aan ku guuleysto waan cusbooneysiin doonaa boostada.
Hore ayaan u haystay, waxay soo baxday in dayactirka mashruuca uu leeyahay qaabkan 'Skippy-XD' oo lagu soo raray .deb oo loogu talagalay Ubuntu 11.10, wuxuuna si fiican ugu shaqeeyaa Lubuntu 13.04. Marka hore kala soo bax xirmada .deb cinwaankan:
Xulo nooca uu Lubuntu u adeegsanayo: 32 ama 64 xoogaa. Laba jeer guji markay soo dejiso oo ha u oggolaato Gdebi inay rakibto.
Hadda waa inaad rakibataa Brightside:
sudo apt-get rakib brightside
Nasiib wanaagse, weli waxay ku jirtaa keydad, inkasta oo laga soo bilaabo 2004 (waxay rakibi doontaa ilaa 20 ku-tiirsanaan laakiin waa qiimaha ay tahay inaad bixiso) marka la rakibo, raac tilmaamaha ku qoran boostada ee qaabeynta Brightside:
$ bilicsanaanta-guryaha &
oo aad ku hagaajiso koonaha aad rabto. Iyo in lagu rakibo bilawga waa inaad wax ka bedeshaa feylashaan asal ahaan ama superuser:
$ sudo leafpad / iwm / xdg / lxsession / Lubuntu / autostart
dukumiinti ayaa la furay oo waxaad ku dartay dhamaadka qoraalka:
Oo diyaar. Marka waad arki kartaa inaan been kuu sheegayn, waxaan kaaga soo qorayaa mid ka mid ah netbook-kayga oo leh Lubuntu 13.04 waxayna u shaqeysaa sidii soojiidasho, laakiin maahan shaashad la iska indhatirayo:
Si aad ugu guuleysato Brightside si guul leh bakhaarada Lubuntu:
Si aad uga bilowdo Brightside boot, feylka ku yaal Lubuntu ee ay tahay in wax laga beddelo sida superuser waa tan:
hadda haddii qoraalkan aad ku darto dhamaadka:
Adiga ayaa keydin doona, dib u bilaabi Lubuntu waana intaas.
laakiin runtu waxay tahay in tani ay tahay uun wax loo baahan yahay, sidoo kalena lama taabto hawsha caadiga ah ee leh astaanta iyo cinwaanka, haddii aysan jeclayn raaxo.
Laakiin boost wanaagsan! Mararka qaarkood waa inaad is muujisaa
Waad ku mahadsan tahay, aragtidayda shaqsi ahaaneed ayaa ah haddii aad haysato miis yar oo casri ah, inaad u qurxiso wax yar si aad u muujiso ugana dhigto mid shaqeynaya waa raaxo qof walbaa xaq u leeyahay inuu ku biiro, gaar ahaan GNU / Linux. Oo maxaa yeelay waa la samayn karaa.
Na sii dijo
Aragti wanaagsan Brizno
Ku jawaab Denos
Sidee waxyeello u tahay, tani waxay marba marka ka dambaysa u sii sii kordhaysaa sida Mac OSX, waxay muujineysaa inaad qadhaadh tahay kuwa ka hadla dibedda, laakiin gudaha waad ooyeysaa oo aad dooneysaa inaad yeelato Mac cusub.
Waxaan hayaa 2 qodob oo cad oo aan ku xasuusin karo: waxaad xor u tahay inaad wax ka beddesho nidaamkaaga iyo in kale, iyo guud ahaan dadka doonaya kombiyuutarka Mac (oo leh xaddidaad iyo emasculating OS ilaa claustrophobia) waxay aaminsan yihiin in iBorregos kale ay sidoo kale doonayaan. Iyo inaad u timaaddo barta Linux si aad uga faallooto jahwareerkooda qarsoon waa sida kaliya ee aad sameyn karto. Adaa mudan.
Waxay u muuqataa in halkan ciilku yahay mid kale ...
Tus miiskaaga. Haddii aad isticmaasho mawduuc u eg OSX, ka saar waxa ay tidhi.
Si ka wanaagsan ayaa loo adeegsadaa is-dhexgalka 'Xorg interface' oo ah qaabkiisa ugu nadiifsan. Sidan ayaad uga fogaanaysaa dhibaatooyinka.
Waxay umuuqataa qabow.
Ma rakibi doono sababtoo ah waxaan jeclahay desktop-kayga fudud, laakiin waxay i xasuusineysaa markii aan isticmaalayay GNOME Shell (taas oo lid ku ah inta badan halkan, waan jeclahay).
Tani waxay ku dhiirrigelin doontaa in ka badan hal in laga fikiro joojinta hantida lagu khasaarinayo Gnome Shell iyo dib ugu noqoshada desktop fudud.
Ama ogaanshaha sida looga faa'iideysto iyaga habka ugu wanaagsan ee desktop-ka KDE wixii dhab ahaan loo isticmaalo.
Waxaan u maleynayaa in desktop-ka aan jeclahay uu yahay XFCE si hufan sababtoo ah kartidiisa kartidiisa. Sababo la taaban karo awgood waxaan ugu weecday Gnome Shell isla markiiba hareeraha geesaha kulul. Tan waxaan ku fakiri karaa inaan ku noqdo Arch iyo XFCE sidii Eebbe ugu talo galay 😉
Waa calaamad, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa.
Hagaag, waxaan u isticmaali doonaa XFCE Slackware kumbuyuutarkeyga kale ee duugga ah ee la ildaran Windows XP. Wuxuu durba dhibaato badan kala kulmay Vista.
Cashar wanaagsan, ma ogeyn!
Ku jawaab Lucas
Way i caawisay. Waxaad tahay guud, ogaada
deg deg ah dijo
Haye, ma jiraa qof isku dayay Manjaro? Waan raacay casharrada, laakiin ma aqaano sababta aysan waxba u qabanayn ... ma waxay noqon doontaa dhibaatada xfce?
By the way aad u wanaagsan
Ka jawaab dhaqso
Nacalaa, way ii shaqeysay aniga ... dhibaatadu waxay ahayd in marka hore aan u keeno tilmaamaha geeska, ka dibna aan 'dib ugu jiido' xarunta iyadoo LAGA YAHAY FAROOD FARSAMADA ...
legion 1978 dijo
Waad salaaman tahay ..
Waxaan ku rakibay manjaro, laakiin halkii daaqadaha muraayadda firfircoon, waxay i tusaysaa shaashad cagaaran oo ay ku xardhan yihiin astaamaha daaqadaha dhammaan miisaska kumbuyuutarka .. dhinaca kale si fiican, maxaa yeelay waxaan dhab ahaan u imid inaan weydiiyo haddii ay jirto hab lagu sameeyo isla sidaas miisaska, laakiin waxaan u maleynayaa inay wax ka khaldan yihiin, huh? fikradaha?
waxay u egtahay sidan .. http://es.tinypic.com/r/2yvq9g7/5
sidoo kale si sax ah uma waafaqsana kombuyuutarrada, maxaa yeelay dukumintiyada 3-da ah ee loo yaqaan 'libreoffice documents' waxay ku yaalliin isla desktop-ka .. hase yeeshe, maaddaama jawigeyga lagu habeeyay 12 goobo shaqo iyo barnaamij kasta oo weyn oo midkood ah, wuxuu u shaqeeyaa si aad u la mid ah wixii aan raadinayay.
shil kale Linux farxad leh 🙂
Ku soo bandhig Skippy-XD iyo Brightside oo ku yaal Crunchbang (Debian) iyo Lubuntu
Wordpress miyay ku weydiinaysaa username iyo password si aad u cusbooneysiiso? Xalka